Na Steeti nke Anya Anya, nyocha nke Curalate na Marketingtù Na-ahụ Maka Ntanetị Intanet na-eduzi, naanị 8% nke ndị na-ere ahịa kwenyesiri ike na ha na-eji ihe oyiyi eme ihe n'ụzọ dị irè iji kwalite ntinye aka email. 76% nke ozi ịntanetị na-agụnye bọtịnụ mgbasa ozi mmekọrịta mana naanị 14% nke ozi ịntanetị gụnyere ihe osise. Nkwa mbụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ikike maka ụdị iji mepụta mmekọrịta dị mma na ndị ahịa ha. Nke a na - eme ka ụlọ ọrụ nwee ike ịbịakwute ma tụkwasị ha obi. Mejupụta nke ahụ
Curalate bu ikpo okwu nke n’etinye ihe onyonyo di elu na mkparita uka nke ndi mmadu iji nye gi ihe omuma kachasi ike nke di na Instagram na Pinterest. Ha na-enyere ụdị aka ike ka akụkọ ha sie ike ma gbanwee atụmanya, mmasị, hashtags na ndị na-eso ụzọ n'ime ego ha ga enweta. Njirimara nke Curalate Analytics - Curalate meputara onye ochichi nke n’eji ihe onyonyo gi. A na-ekekọrịta ngwaahịa kachasị elu na weebụsaịtị gị, mkpọ na mbadamba ndị kachasị ewu ewu na akaụntụ Pinterest gị, nyocha azụmaahịa dabere na onyonyo, yana